November 2014 - DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 29 Nov, 2014
Highlights of the Leadership Debate
The most interesting quotes of the debate in Naypyidaw on Leadership. Download the quotes in PDF on dvbdebate.net/press. Watch it tomorrow (Sunday) on DVB TV at 19:15.
· by DVBDadmin · 27 Nov, 2014
Next: What kind of Leader does Burma need?
The next DVB Debate ‘on tour’ in Naypyidaw is about the leadership of this country. The 1-page overview with facts and views below can get you prepared for this Sunday’s broadcast at 19:15 on...
· by DVBDadmin · 24 Nov, 2014
Highlights form the Burma reform show
“ပညာရှင်တွေအမြင်အရ ကျနော်တို့ မြန်မာ့အပြောင်းအလဲက မြန်လွန်းနေတယ်.အန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့။ ကျနော်တို့ အပြောင်းအလဲလုပ်တာမှာ စနစ်တကျပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုတယ်. ကျနော်တို့မှာ ဒီလိုပြောင်းနိုင်မယ့် စွမ်းဆောင်ရည်(capacity)မရှိဘူး. ပြောင်းချင်တာနဲ့ ပြောင်းမယ် ပြောင်းမယ်ပဲ ပြောနေကြတယ်။” ဒေါက်တာတင်မောင်သန်း – မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်း ဒါရိုက်တာ “ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြပြီ ဒါကြောင့် အပြောင်းအလဲကို အမြန်လိုအပ်နေကြတာ” ဦးအောင်ကြည်ညွန့် – အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ———————————————————- “ငါတို့ မင်းတို့ဆိုတဲ့အမြင်တွေ ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ အခုဆို ကျနော်တို့လည်း ရှုမြင်ချက်တွေ ပြောင်းနေပြီ။...
· by DVBDadmin · 19 Nov, 2014
၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အသွင်ပြောင်းအစိုးရသစ်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ နိုင်ငံတကာက ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် မြန်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ တစ်နှစ် နှစ်နှစ် အတွင်း နိုင်ငံတကာရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အားပေးမှုတွေ၊ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ ကို သိမ်းကျုံးရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီးယူကနေ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ဆန်ရှင်နဲ့ အမည်ပျက် စာရင်းတချို့တွေဟာလည်း ပယ်ပျက်လာခဲ့သလို သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အနောက်ဥရောပခရီးမှာ မျက်နှာပန်းလှခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်လည်လောက်ကစပြီး အစိုးရသစ်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီးစဉ်ဟာ မရေရာမှုတွေ၊...
· by DVBDadmin · 16 Nov, 2014
“ကျနော်တို့ မသန်စွမ်းတွေလဲ ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ချင်တယ်။ မသန်စွမ်းထဲမှာမှ ထူးချွန်သူတွေကိုပဲ တော်ကောက်ကြတယ်. အရည်အချင်းရှိပြီးတော့..မွေးလာကတည်းက ပညာသင်ကြားဖို့၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေမရဘဲ လူမှုအသိုင်းအ၀ို…င်းထဲရောက်မလာတာတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။” ဦးမြတ်သူဝင်း – ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ …………………………………………………….. “မသန်စွမ်းကာကွယ်ရေးဥပဒေထဲမှာ ကျနော်တို့ မသန်စွမ်းတွေ ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့တာမှန်တယ်၊ ကျနော်တို့ အကြံပေးခဲ့တာတွေ၊ ထည့်စေချင်တဲ့ အချက်တွေ..ထွက်လာမယ့် ဥပဒေထဲ ဘယ်လောက်ပါမလဲ အရေးကြီးတယ်။ ဥပဒေထွက်ပြီ.. ထွက်ပြီးရင် ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုသေးတ…ယ်။...